Serge Aurier tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bolo mbola tsy fantatra
Home TORO FARANY AFRICAN Mpilalao Football any Ivory Coast Serge Aurier tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bolo mbola tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra iray fantatra amin'ny anarana hoe "The Bison". Ny tantaran-tantaran'i Serge Aurier momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra ho anao ny fitantarana feno momba ny hetsika mahavariana hatramin'ny vanim-potoana hatramin'ny fahazazany. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny laza, fianakaviana sy ny fifandraisan'ny fiainana. Ankoatra izany, maro ireo zava-misy momba ny OFF-Pitch (tsy dia fantatra loatra) momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fananganana trano sy ny muscular. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny Bio Bio Serge izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Serge Aurier tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina biography facts- Fiainana tany am-piandohana sy tamina fianakaviana
Teo am-piandohana, i Serge Aurier dia teraka tamin'ny andro 24F of December 1992. Izy dia teraka tamin'ny ray aman-dreniny, Ramatoa sy Mrs Leon Gbizie tao amin'ny faritra tandrefan'i Côte d'Ivoire, tao anatinà tanàna kely antsoina hoe Danane.
I Serge dia teraka tamin'ny zaza faharoa tamin'ny ankizy dimy. Nihalehibe tao an-tokantrano football izy noho ny dadany izay mpilalao baolina matihanina taloha. Leon Gbizie taorian'ny fisotroan-dronono dia lasa mpanampy ara-panjakana tao amin'ny Fitsarana Distrika ao Ouragahio, Côte d'Ivoire. Ity ambany ity ny sarin'i Leon sy ny zanany.
Serge Aurier nandany ny sivy taona voalohany niainany niaraka tamin'ny ray aman-dreniny talohan'ny fisarahana sy fisaraham-panambadiana izay nanamarika ny niandohan'ny fahasahiranany.
Tamin'ny taona 1992, fony i Serge fony 10 taona dia nisy ady an-trano nipoitra tao amin'ny tananan'i Côte d'Ivoire. Teo ambany fangatahan'ny reniny, i Serge dia kely dia tsy maintsy niasa niaraka taminy tany Frantsa namela ny rainy tany Afrika.
Serge Aurier tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina biography facts- Life in Paris
Rehefa tonga tany Frantsa izy dia nahita ny fitiavana ny renin'i Serge taorian'ny fisarahana tamin'ny vadiny. Nihaona sy nanambady mpitondra fiarakaretsaka iray antsoina hoe Michel Aurier izay nanaiky ny hanangana ny zanany lahy izy. Tamin'io fotoana io dia nahazo ny anarana i Serge "Aurier". Niara-nipetraka tamin'ny mamanay, stepdad sy ny rahalahiny i Serge, Christopher, any amin'ny manodidina an'i Sevran, any amin'ny faritra avaratr'i Paris.
Tahaka ireo mpifindra monina Afrikana maro hafa, ny fianakavian'i Sergi Aurier dia tafiditra ao anatin'ny iray amin'ireo tanàna mahantra indrindra ao an-drenivohitra frantsay. Matetika loatra ny tanànan'i Sevran no voatsikera noho ny vaovao momba ny heloka bevava, ny fandikan-dalàna, ny herisetra ary ny tsy fisian'ny asa tsy misy farany. Raha ny marina, tsy noderaina velively ny kaominina noho ny firaisankinany.
Fantatrao ve? ... Sevran, renivohitry Frantsay taloha no nalaza ho fitokonana tsy mihinan-kanina 6 vavolombelon'ny ben'ny tanàna maheriny Stephane Gatignon. Nanao fitokonana tsy hihinan-kanina i Stephane mba hanentanana ny governemanta hanampy amin'ny famatsiana fepetra hanamaivanana ny krizy ao amin'ny distrika. Ity ambany ity ny sarin'ny ben'ny tanàna maherifo.
Niaiky i Aurier fa indray andro vitsivitsy, dia sarotra kokoa ny resaka heloka bevava. Ankoatr'izay, ny fiainany tamin'ny fahatanorany tany Sevran dia tsy hoe tsy manan-tsiny. Ao amin'ny teniny;
"Nitony ny sevran. Talohan'izay dia mbola mampidi-doza kokoa izany, ary mbola ratsy kokoa. Zavatra iray tokony hatahorana izany. Nisy olana teo amin'ny toerana rehetra
Tamin'izany fotoana izany, dia nihantona tamin'ny endriny maranitra aho. Sarotra ny misoroka izany rehefa mipetraka eto ianao. Izany dia nanatanjaka ny saiko "
Hatramin'izao fotoana izao, i Aurier dia mbola tsy nahavita nanongana tanteraka ny endriky ny endrika fihetsika tsy dia fahita loatra izay niforona nandritra ny fahatanorany teo anivon'ny fiakaran'ny fianakaviana, sy ny fiarahamonina sosialy sarotra.
Serge Aurier tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina biography facts- Asa fanorenana
Nipoitra tao amin'ny tanàna iray mampiady hevitra ny fahabangan'ny fahitalavitra, raha tsy nisy baolina kitra teo amin'ny tongony. Ny fitiavan'i Serge ho an'ny baolina kitra dia nahita an'i Mr Afid Djaadaoui (jereo eto ambany) izay tompon'andraikitra tamin'ny fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena tany Sévran.
Afid koa dia mpamorona ny "Fisorohana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ", a programa izay nahafahan'i Aurier sy i Christopher rahalahiny rahalahiny niaraka tamin'ny ankizy hafa mba hilalao baolina kitra.
Serge Aurier tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina biography facts- Ny Fitsapana
Na dia nandeha an-tsekoly aza i Serge dia nandray anjara tamin'ny fifanintsanana an-kalamanjana natao tamin'ny alarobia sy ny sabotsy. Nitaingina ny mpijery tamin'ny tadiny izy, nanomboka tamin'ny fanombohan'ny volana 2005 i 13 dia nanolotra soso-kevitra momba ny fisedrana UXNUMX. Nanana fitsapana nahomby tao amin'ny clubclub Villepinte izy.
Raha nilalao ho an'ny klioban'ny tanora i Serge, dia hita fa olona tena tsara Tapa-kevitra ny hanao ny nofinofiny matotra. Na dia nitarika ho amin'ny fandresena aza ny ekipany, dia tsy fikirizana fotsiny ny faniriany.
Nirotsaka ho matotra i Aurier, ka nanomboka nanonona anarana Makelele ary Essien satria nitana ny anjara asany izy ary nanana ny ara-batana sy ara-teknika. Toe-javatra kely izy, nefa mbola mitongilana sy manenika.
Nirotsaka be i Aurier ka niala sasatra ho an'i Lens izy, ary teo izy sy i Christopher rahalahiny. Voatery nandao ny fianakaviany sy ny namany ny rahalahy roa, rehefa nisoratra anarana ho an'ny zanak'izy ireo.
Serge Aurier tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina biography facts- Mitsangàna mba ho ankizilahy
Aurier, izay nandritra ny fotoana nahamety azy, dia lasa kapitenin'ny mpilalao baolina kitra tao Len. Ny fifanarahana matihanina voalohany dia nosoniavina tamin'ny taona 16 tao amin'ny 2009. Ny fifampizarana ekipa voalohany amin'ny tarika voalohany amin'ny taona faharoa dia nahaliana ny tombotsoa avy amin'ireo klioba frantsay. Ao amin'ny 2012, Nifindra tany Toulouse i Aurier. Nanomboka nilalao ho toy ny fiarovan-tena izy ary nanamafy ny fahaizany fiarovana teo amin'ny klioba.
Ny mampidi-doza amin'ny milina fiarovan-tena sy ny fiarovana fiarovana dia nahaliana ny PSG izay naka azy lozam-pifidy alohan'ny hidirana ny fifanarahana maharitra. Amin'ny ankapobeny, nahazo ny trondron'i 11 lehibe tao amin'ny Ligy Frantsay i Serge talohan'ny nanapahan'izy ireo hevitra fa fotoana tokony hialana amin'ny ligy.
Tamin'ny 31 August 2017, nosoniavin'i Aurier ho an'ny klioban'ny Premier League Tottenham Hotspur ho an'ny sandam-bola ao amin'ny faritra £ 23 tapitrisa. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Serge Aurier tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina biography facts- Relationship Life
Raha toa ny fampiarahana ireo mpilalao baolina Afrikana matihanina miaraka amin'ny modely mampitolagaga izay nanjary nitazona tao amin'ny fahamendrehany, dia mahagaga fa i Serge dia mbola milaza fa tokan-tena izy. Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, i Serge dia ambany BAE-less ary manafina ny fiainany manokana amin'ny vahoaka.
Serge Aurier tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina biography facts- Vonjeo am-panajana
Voarakan'i Leon Gbizie indray ny antso nalefan'ny daholobe, rain'i Serge Aurier nitaraina fa efa nilaozany izy ary tsy niraharaha tanteraka ny zanany lahy. Gbizie dia nilaza fa efa nogadrain'ny zanany lahy nandritra ny taona maro izy (hatramin'ny nialany tany France niaraka tamin'ny maman). Niteny tamin'ny gazety ivoariana izy fa tsy takatr'izy ireo hoe nahoana izy no tokony ho ny dadan'ny zanakalahy iray miliara-jato ary mbola miaina toy ny fanenjehana.
Araka ny voalazan'i Gbizie, ny zanany lahy dia nandà tsy hifandray ara-batana taminy ary nandoa ny fandaniana ara-pitsaboana mba hanasitranana aretina iray izay nalemy azy. Ao amin'ny teniny;
"Tsy nihaona tamin'ny zanako lahy aho tato ho ato. Miezaka foana ny manatona azy aho rehefa miaraka amin'ny ekipa nasionaly izy. Manalavitra ahy izy ary mamaly foana ny hafatro amin'ny alalan'ny iray amin'ireo namany, "
Hoy i Gbizie.
"Ny tena mampalahelo ahy dia ny zanako dia tsy mahalala akory ny fijaliako. Manome ahy vola fotsiny izy mba hanaisotra ahy. Tsy niantso ahy velively izy, ary noho izany - ny reniny dia mametraka izany eo amin'ny loha "
Serge Aurier tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina biography facts- Fampihavanana amin'ny raim-pianakaviana
Ny mahita ny zanany lahy mitondra ny anaran-dehilahy hafa dia nitondra fanaintainana ho an'i Gbizié Léon. Na izany aza, ny zavatra iray dia azo antoka. Nanantena izy fa ho tonga any amin'ny zanany ny fitarainany ampahibemaso ho an'ny gazety. Tsy toy ny Mario Balotelli, ny zava-misy dia tsy nisy vokany teo amin'ny fifandraisan'ny Aurier sy ny rainy.
Ny andro nahaterahany: Tonga teo anelanelan'ireo lehilahy roa ireo ny fotoana fialamboly.
Ity ambany ity ny sarin'i Aurier ao amin'ny 2015 ny fiverenan-drainy any amin'ny hotely Sofitel Ivoire taorian'ny taona 14 tsy nifankahita.
Serge Aurier tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina biography facts- Fisamborana
Voasambotra indray i Serge ary nampangaina ho fitsarana noho ny fanenjehana polisy iray tany ivelan'ny toeram-pandihizana iray tao Paris. Voampanga ho meloka izy ary nitarika azy ho sazy roa volana tao am-ponja. Soa ihany, i Serge dia nomena fahafahana nanoloana ny antso.
Ity fisamborana ity dia nanakana ny fandrosoany tsy handray anjara amin'ny lalao UEFA Champions League amin'ny Arsenal ao amin'ny 2016 satria nesorina ny Visa nomen'ny manampahefana Britanika.
Fantatrao ve?... Tottenham dia tsy maintsy namoaka an'i Aurier ho fanamarihana farany azy taorian'ny niatrehany fitsaràna tao amin'ny efitrano fitsarana mba hialana amin'ny fahazoany visa Anglisy.
Serge Aurier tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina biography facts- Tatitra manokana
Manana ny fahaleovan-tena i Serge izay afaka manome fandrosoana lehibe eo amin'ny fiainany manokana sy matihanina. Izy dia olona iray mianatra amin'ny fahadisoana ary ny fahafahany miditra ambony dia mifototra amin'ny traikefa sy ny fahaizany ihany.
Serge dia Halloween freak izay mahafantatra ny fomba hahazoana ny safidy tsara indrindra ho an'ny Halloween mandritra ny alina.
Tia mozika tsara i Aurier satria mpankafy hip-hop izy. Nantsoiny hoe Shakira, Justin Bieber, ary Sefyu ankoatra ny mpanakanto tiany indrindra. Matetika izy no hita amin'ny loha.
saro-po: Nasaina nitaraina i Aurier Di Maria a "mpanao hatsikana"Sy Laurent Blanc"kisendrasendra". Izany fihetsika izany dia nanongana ny fanapahan-kevitry ny fitantanana ny PSG mba hampiato azy.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Serge Aurier momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Nicolas Pepe ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana mbola tsy nambara
Eric Bailly tantara an-tsary momba ny tantaram-pitiavana tsy hita isa
Salomon Kalou ny tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa
Emmanuel Eboue tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana malaza tsy fantatra
Wilfried Zaha ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny tantaram-pitiavan'i Cheick Tiote momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Didier Drogba tantaram-pitiavana momba ny tantaram-piainana tsy hita isa